Offline Installation the .NET Framework 3.5 on Windows 8 - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by Aung Thiha Maw on January 13, 2013 at 7:03pm
၁။ Control Panel>Program and Features မှတဆင့် Turn Windows features on or off ကို သွားပါ။ .NET Framework 3.5 ( include .NET 2.0 and 3.0) ကို check mark ပေး၍ install လုပ်ပါ။
၂။ Install လုပ်နေစဉ်အတွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် internet ပျက်တောက်သွားခဲ့ရင် အောက်ပါ errors တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• 0x800f0906: “Windows couldn't connect to the Internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the Internet, and click Retry to try again.”
• 0x800F081F: “The changes could not be completed. Please reboot your computer and try again.”
Internet connection error မတက်အောင် Deployment Image Servicing and Management (DISM) command-line tool ကို အသုံးပြုပြီး offline install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Windows 8 installation DVD or ISO Image တော့လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ Command Prompt ကို Run as administrator အနေနဲ့ဖွင့်ပါ။
၂။Command prompt မှာ
"DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:F:\_sources\_sxs" command ကိုရိုက်ပါ။ F: ဟာ သင့်ရဲ့ DVD drive ဖြစ်ပါတယ်။
• /All ကို .NET Framework 3.5 ရဲ့ Features အားလုံးကို အသုံးပြုဖို့ပါ။
• /LimitAccess ကတော့ Windows Update မှတဆင့် internet မချိတ်စေဖို့ပါ။
• /Source ကတော့ install လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Files တွေရဲ့ တည်နေရာကို ပြပေးတာပါ။
၃။ The Operation Complete Successfully ပြပါလိမ့်မယ်။ Command Prompt က Run as Administorator မဟုတ်ခဲ့ရင် Error: 740 ဆိုပြီး ပြပါတယ်။
၄။ Control Panel>Program and Features မှတဆင့် Turn Windows features on or off ကို သွားပါ။ .NET Framework 3.5 ( include .NET 2.0 and 3.0) ကို check mark ပေး၍ install လုပ်ပါ။ Internet မတောင်းတော့ပဲ Install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အောင်သီဟမော် Views: 229